အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင် – Zartiman
မိုးမြင့်သဇင်ဟာ ခေါင်မိုးထပ်မှာ ဘောင်း ဘီအတိုလေးနဲ့ မိမိုက်နေအောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်း နေတာဖြစ်လို့ ပုရိသတွေ ရင်ကို လှုပ်ခတ် သွားမိ အသေအချာပဲမို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန် လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကဲ….ပရိသတ်တွေကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်.. ။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ဆက် လက် လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးကြမယ်မလား……. ။
ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလောက်အောင် သိကြမယ်ထင်ပါတယ် နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေက ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ထူးခြားမှုတွေ ဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ သူမရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက်စားပုံေ လးတွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ သူမက အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ်ပြီး photo shooting အမိုက်စားလေးတွေကို လက် ခံရိုက်ကူးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်ြ မင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေ တာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပ လာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ကတော့ အခုလက်ရှိမှာလည်း အမိုက်စား ပုံလေးတွေနဲ့ ခြွေချလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။
မိုးမွငျ့သဇငျဟာ ခေါငျမိုးထပျမှာ ဘောငျး ဘီအတိုလေးနဲ့ မိမိုကျနအေောငျ ပိုဈ့ပေး ဓါတျဖမျး နတောဖွဈလို့ ပုရိသတှေ ရငျကို လှုပျခတျ သှားမိ အသအေခြာပဲမို့ ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျ လညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ကဲ….ပရိသတျတှကေလညျး မျောဒယျလျ မိုးမွငျ့သဇငျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေးတှပေေးခဲ့ဖို့ မမလေို့ကျပါနဲ့နျော.. ။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ ဆကျ လကျ လြှောကျလှမျးမယျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးကွမယျမလား……. ။
ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲ မျောဒယျတဈဦး ဖွဈတဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျ ကို မိတျဆကျပေးစရာမလိုလောကျအောငျ သိကွမယျထငျပါတယျ နျော။ သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှတှကေ ပုရိသတှကေို ဆှဲဆောငျနတေဲ့ ထူးခွားမှုတှေ ဆိုရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူး။ သူမရဲ့ ဆကျစီ ကကြ အမိုကျစားပုံေ လးတှေ ဟာ ဆိုရငျ လညျး ဖဘှေ့တျ စာမကျြနှာပျေါတှငျ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။
ယခုလကျရှိမှာတော့ သူမက အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျ နတောဖွဈပွီး photo shooting အမိုကျစားလေးတှကေို လကျ ခံရိုကျကူးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အောငျွ မငျပွီး ပရိသတျခဈြတဲ့ မျောဒယျတဈဦးဖွဈအောငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားနေ တာကိုလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျ။ ဘယျလိုဖကျရှငျလေးတှပေဲ ဝတျဝတျ တဈနေ့ တဈခွား ပိုပွီး ထူးခွား လှပ လာတဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျကတော့ အခုလကျရှိမှာလညျး အမိုကျစား ပုံလေးတှနေဲ့ ခွှခေလြိုကျပွနျပါပွီနျော။
ကောက်ကြောင်းအလှလေးတွေကို ဆက်ဆီကျကျ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို